Madaxweynaha Somaliland oo sheegay in ay joojiyeen dhismaha saldhiga milatariga ee Imaaraatka Carabta ee Berbera - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMadaxweynaha Somaliland oo sheegay in ay joojiyeen dhismaha saldhiga milatariga ee Imaaraatka Carabta ee Berbera
Madaxweynaha Somaliland oo sheegay in ay joojiyeen dhismaha saldhiga milatariga ee Imaaraatka Carabta ee Berbera
September 14, 2019 Puntland Mirror Somalia, Uncategorized 0
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi . [Sawir Hore]
Berbera-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay in dowladiisu ay joojisay saldhiga milatariga ee Imaaraatka Carabta ay ka dhisanayeen magaalo xeebeedka Berbera.
Isaga oo ka hadlayay Berbera maanta oo Sabti ah waxa uu yiri: “Garoonkii Berbera ee in badan laga murmayay ee Imaaraatku dhisayeen ee la lahaa waa ciidan, waanu ka wareejinay ciidankii waa garoon shacab maanta,”
Waxa uu sheegay in shirkadii garoonka cusub dhisi lahayd ay imaan doonto asbuucaan, balse ma uusan faahfaahin cida maalgelinaysa.
Imaaraatka Carabta ayaa dhismaha saldhiga bilowday sanadkii 2017 iyaga oo heshiis la galay masuuliyiinta maamulka Somailand, balse dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sanadkii lasoo dhaafay si rasmi ah uga horjeesatay dhismaha saldhiga, waxayna ku tilmaamtay xadgudub qayaxan oo ka dhan ah sharciga caalamiga ah.
Qarax miino oo lagu dilay masuuliyiin katirsan maamul goboleedka Hir-Shabelle
Labo qof oo lala xiriirinayo qaraxii Muqdisho oo la xiray
Muqdisho-(Puntland Mirror) Saraakiisha ku sugan Muqdisho ayaa sheegay in labo qof loo xiray qaraxii weynaa ee Sabtida ka dhacay Muqdisho kaasoo ay ku dhinteen dad ka badan 300 qof. Sargaal katirsan nabadsugida baaraysa weerarka ayaa [...]
Ugu yaraan 13 qof oo ku geeriyooday weerar ay Al-Shabaab ku qaaday huteel kuyaala Muqdisho
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ugu yaraan 13 qof ayaa ku geeriyooday weeraro maanta oo Arabaco ah ka dhacay huteel kuyaala caasimada Soomaaliya ee Muqdisho oo ay geysatay Al-Shabaab, sida uu sheegay sargaal booliis ah. Weerarka kowaad ayaa [...]
askar kamid ciidamada Midowga Afrika ee jooga Soomaaliya oo lagu xukumay hal sanno kadib markii lagu helay in ay iibsadeen qalab militari
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ciidamo katirsan ciidamada nabad ilaalinta ee Midowga Afrika oo ku sugan gudaha Soomaaliya ayaa hal sanno oo xabsi ah lagu xukumay sidoo kalena waxaa laga qaaday garaadadoodii kadib markii dhawaan lagu qabtay iyagoo [...]